Canab dhoobo xilliga dayrta | February 2020
Ugu Weyn Ee Canab dhoobo xilliga dayrta
Canabka miraha xilliga dayrta
Waa hagaag, kan aan jeclayn, hoyga ku yaal hooska canab, iskuday inuu casiir leh, midho bisil oo dhadhan fiican leh? Aragtida muuqaalkan cajiibka ahi kama tagi doonto qof aan kala sooc lahayn, iyo dhirta cagaaran iyo roodhida cuntada leh waxay qurxin kartaa wixii hanti ah. Ka dibna waxaan soo saarnay dacha leh warshad noocan oo kale ah, waxaynu ku dadaalaynaa hal wax - in la soo ururiyo goosashada qani ku ah.
Si loo gaaro koboc wanaagsan, tayo sare leh iyo midho goos goosad ah, waa lagama maarmaan in la barto qaar ka mid ah xeerarka, noocyada, iyo mudnaanta ee manjooyin this dalagga. Waxyaabaha ugu muhiimsan marka la gooyo geedka waa in la dhiso saamiga ugu sarreeya ee koriinka koritaanka iyo horumarka baybalka laftiisa, iyo sidoo kale samaynta taajka bacriminta iyo ilaalintiisa inta lagu guda jiro nolosha nolosha geedka canabka ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Canab dhoobo xilliga dayrta 2020